Kenya oo dadkii ka cararay Al-Shabaab ku soo rogtay amar adag oo halis ah |
Kenya oo dadkii ka cararay Al-Shabaab ku soo rogtay amar adag oo halis ah
Dowlada Kenya ayaa ka dalbaday macalimiinta dalkaasi gaar ahaan kuwii ka shaqeyn jiray wadooyiga dalkaasi inay dib u bilaabaan howlahoodii kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay ka carareen amni daro ka jirtay gobolkaasi.
Inka badan 2,000 oo macalimiin ah ayaa ka cararay degmooyinka Wajeer, Mandheera iyo Gaarisa kadib markii Alshabaab weeraro kala duwan ay ka geysteen gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Waxyaabaha ugu badan ee macalimiinta ay ka carareen ayaa ahaa amniga dalkaasi, iyagoo sheegay inay kala carareen gobolka qoysaskooda iyo dadkii ay kaga baqayeen weerarada Alshabaab ay geysanayaan.
Joseph Nkaiserry, wasiirka cusub ee arimaha gudaha dalkaasi ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada Nairobi ee dalka Kenya in dowlada ay xaqiijisay adkeynta amaanka deegaanadii ay ka shaqeynayeen loona baahan yahay in dib macalimiinta shaqadooda u bilaabaan.
“Waxaan doonayaa inaan ka dalbado macalimiinta inay geesiyaal u noqdaan sida dhamaan shacabka Mandheera, ayna dib u laabtaan si ay u gutaan waajibaadkooda, sababtoo ah waxaa halkaasi ka jira amni, waxaana damaanad qaadeynaa amnigooda”ayuu yiri wasiirka arimaha gudaha Kenya.
Wasiirka arimaha gudaha Kenya ayaa sheegay in dowlada Kenya ay dajisay qaab cusub oo lagu sugayo amaanka dalka ku yaala geeska Africa ee kenya, waxaana uu sheegay in weerarada Alshabaab ay ka hortagi doonaan.
Alshabaab ayaa weeraro badan oo ay ka geysteen dalka Kenya waxay u sababeeyeen joogitaanka ciidamada kenya ee dalka Soomaaliya oo sanadkii 2011 soo galay dalka Soomaaliya Forzest without prescription, generic lioresal.